Fiaraha-miasa tontolo iainana manerana ny sisintany: Israel, Palestine ary Jordania
Home » Travel Associations News » Fiaraha-miasa tontolo iainana manerana ny sisintany: Israel, Palestine ary Jordania
Aogositra 13, 2017
Rehefa tonga teo amin'ny sisintany israeliana-jordan i Shadi Shiha ary nahita ireo miaramila israeliana mitam-piadiana sy ny saina israeliana dia saika nitodika izy ary nody.
"Tena raiki-tahotra aho," hoy ny nolazain'ny The Media Line tamin'ny fihomehezana. “Nahita polisy tany Jordania aho saingy tsy manana basy. Nihevitra aho fa handeha ho any amin'ny faritra misy ady miaraka amin'ny fiara mifono vy sy basy. ”
Efa mafy ny nandresy lahatra ny fianakaviany hamela azy ho tonga mianatra any Israel. Niahiahy ny amin'ny fiarovana azy izy ireo, ary na dia talohan'ny fifanenjanana farany teo amin'i Israel sy i Jordania aza dia maro ny Jordaniana no nanohitra ny fifandraisany tamin'i Israel. Niantso azy hivory ny sampam-pitsikilovana Jordanianina ary nanontany azy ny antony hankanesany any Israel.
Efa ho herintaona izay. Shiha, izay mpandihy mpandala aina matotra ihany koa, dia nandany semesera roa tao amin'ny Institut Arava tao Kibbutz Ketura any atsimon'i Isiraely ary nilaza izy fa nanova ny fomba fijerin'izao tontolo izao izany.
"Tsy fantatro fa misy toerana iarahan'ny Palestiniana sy israeliana miara-monina ary mpinamana fotsiny izy ireo," hoy izy. “Nandeha tany Haifa aho (tanàna arabo-jiosy mifangaro) ary miara-miaina izy ireo toa tsy misy dikany. Nandeha tany amin'ireo tobin'ny mpitsoa-ponenana Palestiniana tao amin'ny morontsiraka Andrefana koa aho ary nahatsiravina ny fomba fiainan'ny olona. ”
Ny Ivotoerana Arava, mifandraika amin'ny University Ben Gurion, dia manolotra programa ekena ho an'ny mpianatra ambaratonga faharoa sy ho an'ny mpianatra nahazo diplaoma. Ny sasany tonga mandritra ny enim-bolana; ny hafa mandritra ny herintaona. Ny hevitra dia ny handinihana ireo olana momba ny tontolo iainana avy amin'ny fomba fiasa sisin-tany sy ny fari-tany.
Kely ny fandaharana, manome fotoana ahafahan'ny olona mifanerasera amin'ny profesora ary manana fotoana hanaovana fikarohana momba ny tontolo iainana.
"Nandritra ny 20 taona, ny Ivotoerana dia nanatsara ny fiaraha-miasa eo amin'ny tontolo iainana manoloana ny fifanolanana ara-politika amin'ny alàlan'ny programa akademika izay mampivondrona israeliana, palestiniana, jordanianina ary mpianatra iraisam-pirenena," hoy i David Lehrer, talen'ny mpanatanteraka ny fandaharana tamin'ny The Media Line. "Amin'ny alàlan'ny programa fikarohana momba ny rano, angovo, ny fambolena maharitra, ny fiarovana ny tontolo iainana ary ny fampandrosoana iraisam-pirenena, aorian'ny 20 taona dia manana alumni 1000 mahery eran'izao tontolo izao isika."
Ny fampianarana dia manomboka amin'ny fitantanana rano any Moyen Orient ka hatrany amin'ny fanelanelanana momba ny tontolo iainana sy ny fanapahan-kevitra momba ny fifanolanana ho an'ny Baiboly ho lakilen'ny eritreritra tontolo iainana. Ny mpianatra dia matetika isiraelita ampahatelony, iray ampahatelon'ny Arabo, izay ahitana ny Jordaniana, Palestiniana, ary ny teratany Arabo israelita, ary ny iraisampirenena iraisana, ny ankamaroany dia avy any Etazonia.
Ireo mpianatra palestiniana dia nanohy nanatrika na dia teo aza ny fitomboan'ny “fanoherana ny normalisation”, hetsika iray izay manalavitra ny fiaraha-miasa imaseliana-palestiniana mandra-pivoaran'ny fifampiraharahana amin'ny fandriam-pahalemana. Nilaza i Lehrer fa nanjary sarotra kokoa ny nandresy lahatra ny mpianatra Jordanianina hanatrika, satria nihamafy ny toe-tsain'ny vahoaka tao Jordania nanohitra an'i Israel.
"Te hahafantatra bebe kokoa momba ny fifanolanana israeliana-palestiniana aho," hoy i Shiha. “Naheno ny zava-drehetra avy amin'ny haino aman-jery aho ary nahatonga azy ho ratsy be izany. Tonga teto aho hihaona israeliana vitsivitsy sy jiosy sasany satria mbola tsy nihaona tamin'izy ireo mihitsy aho. Raha ny fampitam-baovao dia toa namono sy nitifitra Arabo foana izy ireo. ”
Ny Institute Arava dia miorim-ponenana ao amin'ny Kibbutz Ketura, kibbutz maro karazana, natsangana tamin'ny 1973 tany am-boalohany, nataon'ny Amerikanina niaraka tamin'ny hetsiky ny tanora Jodia, lalina tany an'efitra Arava. Ankehitriny, misy Israeliana 500 mahery monina any, miaraka amina orinasa manomboka amin'ny daty mitombo ka hatramin'ny fambolena ahidrano mena ho an'ny kosmetika hatramin'ny zaridaina manokana ho an'ny zavamaniry fanafody.
Raha mipetraka ao amin'ny efitrano fatoriana amin'ny kibbutz ny mpianatra dia misakafo ao amin'ny efitrano fisakafoana kibbutz izy ireo ary asaina hiaraka amin'ny mpikambana kibbutz amin'ny fankalazana ara-pinoana sy hetsika manerana an'i kibbutz, ao anatin'izany ny fampakaram-bady. Misy ihany koa ny dobo filomanosana mitovy habe amin'ny Olaimpika izay manampy amin'ny famelezana ny hafanan'ny tany efitra.
Toy ny fandaharam-pianarana maro any ivelany, tsy mora izany. Raha mahazo vatsim-pianarana feno ny Palestiniana sy ny Jordaniana, ny Israeliana tompon-tany dia mandoa $ 2000, ary ny mpianatra amerikana kosa mandoa $ 9000 isam-bolana, ao anatin'izany ny efitrano sy ny birao. Mbola ambany lavitra noho izany ny ankamaroan'ny oniversite amerikana rehetra.
Yonatan Abramsky, mpianatra israeliana, vao tsy ela akory izay no nahavita ny asany miaramila.
"Tiako hatrany ny olana ara-tontolo iainana sy ny fiainana maharitra," hoy izy tamin'ny The Media Line. “Hitady vondrom-piarahamonina tany an'efitra aho ary nahare momba ity toerana ity ary nanamarina azy. Tena nahagaga. ”
Dallal, vehivavy Palestiniana nangataka ny tsy hanome ny anarany farany, dia efa nahavita ny mari-pahaizana BA avy amin'ny Oniversite Bir Zeit.
"Tsy nieritreritra ny hankafy azy be toa ahy aho," hoy izy tamin'ny The Media Line. “Afaka miteny izay tiako holazaina aho ary manao izay tiako hatao. Manolotra ny tenako fotsiny aho na inona na inona fiaviako sy fianakaviako. Tsy dia miady saina loatra aho noho ny any amin'ny morontsiraka Andrefana. ”
Nilaza izy fa tsy tian'ny reniny ny handaozany ny Banky Andrefana, fa noho ny antony nentim-paharazana bebe kokoa dia ny tsy fifandraisany amin'ny fifanolanana israeliana-palestiniana.
"Satria zazavavy aho ary manana andraikitra iray manokana - tokony hanambady aho ary hanan-janaka, fa tsy hivezivezy," hoy izy.
Vao nankalaza ny faha-20 taonany ny Instituteth taona. Tafiditra ao anatin'ny fankalazana izy ireo dia nandefa ny programa Arava Alumni Innocation Program, izay manome vola vola ho an'ny ekipa alimana hanohanana ny fandraisana andraikitra maharitra sy ny fifandraisana milamina manerana ny sisintany. Ny ekipa dia tokony hampiditra teratany roa farafaharatsiny - israeliana / palestiniana na israeliana / jordiana na palestiniana / jordanianina.
Niverina tany Amman ny Jordaniana Shadi Shiha ary nanokatra orinasa miaraka amin'ny namany roa ho an'ny, fanasana fiara sy savoka izay tsy mampiasa rano. Amin'ny fararano dia hitety ny tobin'ny oniversite any Etazonia izy ho isan'ny fitsangatsanganana ho an'ny Arava Institute.
Tora-pasika Koety: al-Khiran - faritra fialantsasatra hialana